' शान्तीनगर ' को नाम ' शान्तीनगर ' राखौ न है भन्ने प्रस्ताव मेरै हो ।
एउटा यादगार , जवर्जस्त बाल्यकालीन सम्झना !
अहो ! एउटा बस्ती जो नामको कारण बदनाम थियो । जहाँका मानीसहरुले आफु बस्ने बस्तिको नाम समेत उच्चारण गर्न हिचकिचाउने गर्थे । अनी त्यही बस्तीको नाम परीबर्तन गर्ने अभियानमा अभियन्ता बनेको थिए । प्रत्यक्ष बस्तीमा गएर नाम परीबर्तन समारोहमा सरीक भएको सँगै बस्तीको नाम अबोध दिमागले सोचर''शान्तीनगर' राख्न प्रस्ताब गरेको अनी अन्तत: सबैलाई नाम मनपरेसी त्यही नाम रहन गएको त्यो शानदार, जबरजस्त, जिन्दाबार पल ।
कक्षा ४ मा पढ्थे तेतीखेर । श्रीजनशिल शान्ति बाल क्लवमा अध्यक्षको हैसियतमा थिए । त्यही हैसियतबाट म सामाजिक कार्यहरुमा समेत आवद्ध हुँदै मेरा तिबेलाका दिनहरु व्यतित हुने गर्दथे । एक दिनको कुरा हो । एकाबिहानै श्रीजनशिल समाज सुधार संस्थाका अध्यक्ष बलबहादुर गिरी मेरो घर आउनुभयो । श्रीजनशिल समाज सुधार संस्थाको एउटा सिस्टर वीङ्स थियो हाम्रो श्रीजनशिल शान्ती बाल क्लब । त्यही भएर श्…
लालीगुराँसको फूलबाट उत्पादित जुस खान आइजानु है हाम्रो कपुरकोट तिर ।
तस्बिर : कुलदिप न्यौपाने , धुर्वराज वली
सल्यानको कपुरकोटमा लालीगुराँसको फूलबाट जुस उत्पादन गर्ने गरिन्छ । धनवाङ ७ कपुरकोटमा तेजबहादुर थापाले लालीगुराँसको फूलवाट जुस उत्पादन थाल्नुभएको हो । गर्मी मौसममा जुस पिएपछि स्वास्थ्यका लागि फाईदा हुने भएकाले लालीगुराँसको सर्वत अर्थात जुस उत्पादन थालेको थापाले जानकारी दिनुभयो ।
पहाडी फलफूल संरक्षण तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी फुललाई प्रशोधन गरी जुस उत्पादन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । २ सय ५० मिलि लिटर जुसलाई एक ३० रुपैयाँमा विक्रि गर्दै आएको उहाँको भनाई छ ।
स्थानियहरुले गुराँसका फूलहरु संकलन गरेर ल्याउने र थापाले खरिद गरी जुस उत्पादन गर्दै आउनुभएको हो ।
जसका कारण स्थानियहरुले रोजगारी समेत पाएका छन् । जुसको प्रयोगले स्वास्थ्यलाई फाईदा गर्ने भएकाले जिल्ला बाहिर समेत विक्रि हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैविच थापाले सञ्चालन गरेको उद्योगमा गाउँमा पाईने अन्य अमला, पुदिना लगाएत बिभि…
ईतिहासमा सल्यान ( तस्बिरहरु )
ईतिहासमा सल्यान ( तस्बिरहरु )२०२२/ २३ साल तिरको सल्यान यस्तो थियो ।
यि तस्बिरहरु जे क्रस नामका अमेरिकी नागरिकले सल्यान भम्रणमा आउँदा कैद गर्नु भएको हो ।